UJULIUS TENNON KUNYE NOMFAZI UVIOLA DAVIS 'IBALI LOTHANDO KUNYE NENKCUKACHA ZOMTSHATO - IINDABA
Eyona Iindaba U-Viola Davis udibana njani nomyeni wakhe kunye neenkcukacha zomtshato
U-Viola Davis udibana njani nomyeni wakhe kunye neenkcukacha zomtshato
Esi sibini sazivuselela izifungo zabo kwiminyaka elishumi kamva. Ifoto nguTibrina Hobson / Getty Izithombe
Ijongene nazo zonke iindaba kunye nomxholo ohamba phambili kwiKnot.
Ichaza amagama amatsha kushishino lomtshato.
Uyaphumelela kudliwanondlebe kunye namabali akhe kunye nokubuyela umva, kuphawu lwentengiso.
Ukuhlaziywa ngo-Epreli 22, 2021
Umdlali weqonga uViola Davis wonwabele ukonwatyiswa, eyenye yeenkwenkwezi ezimbalwa eHollywood ukufumana isithsaba sokudlala (uOscar, uEmmy kunye noTony). Ngo-2021, uDavis wonyulwa enye i-Oscar kwicandelo le-Award Academy ye-Best Actress kwiNdima ehamba phambili emva kokusebenza kwakhe kwi-Netflix Umgangatho omnyama kaMa Rainey .
Ngempumelelo ezininzi zobungcali, ubomi bobuqu bukaViola Davis buye babandakanya amaxesha aqaqambileyo, kubandakanya ibali elimnandi lothando nomyeni wakhe phantse iminyaka engama-20, uJulius Tennon. Ndingoyena mfazi unesizungu emhlabeni, kwaye omnye umntu wathi, 'Umele uthandazele indoda,' uxelele Iphepha lesithandathu kudliwanondlebe luka-2013. UDavis wagqibela ngokuthandazela, ngakumbi, 'indoda enkulu emnyama evela eMzantsi eyayibonakala njengomdlali webhola, esele inabantwana, ekusenokwenzeka ukuba babetshatile ngaphambili.'
Kwiiveki ezimbalwa emva kwaloo mthandazo, wadibana noTennon. Wayesele etshatile kabini kwaye wabelana ngabantwana ababini nomfazi wakhe wokuqala. UDavis noTennon baqhubeka batshata ngo-2003. Nantsi into ekufuneka uyazi malunga nolwalamano lwabo.
Badibana njani uViola Davis noJulius Tennon?
UDavis noTennon bahlangana okokuqala kwiseti ye-CBS show Isixeko seengelosi . UDavis wabethwa ziimpawu ezintle zomyeni wakhe wexesha elizayo, ngelixa wayemamele incoko yakhe nomhlobo. Ngelo xesha, uDavis wayesandula ukufudukela e-LA kwaye ekhalaza ngesi sixeko. Ngaphandle kwemicimbi yakhe, waqonda ukuba wayemnandi kwaye enobubele. Kwaye ndandithandana nentombazana eyayiyingxilimbela, utshilo Uthando Olumnyama OWN . 'Ke ekupheleni kosuku, ndamnika ikhadi lam ... kwaye ekhadini lam, ndandinxibe ihempe yam.'
'Ibiyinto enkulu leyo,' utshilo uDavis, 'Abadlali abaninzi babenamakhadi apho babengenazo ihempe zabo.'
I-Kevork Djansezian / imifanekiso kaFetty
Emva kokufumana ulwazi lukaTennon, uDavis walinda kancinci ukufikelela kwimicimbi yobuqu. Ngokukodwa, ezemali. 'Yintoni etywine isivumelwano ukuba wayemhle,' i Ungabaleka njani ngokubulala Umlingisi ngaphambili uxelele uKelly Ripa kunye noRyan Seacrest. Kwaye emva koko khange ndimbize kangangeeveki ezintandathu kuba ndizama ukwenza ityala lam elibi. Ndandinamanqaku angama-500 etyala kwaye ndandidandatheke kakhulu… Ndakuba ndazi ukuba andizukuyisebenza ngokukhawuleza okukhulu, ndandifana nokuthi, 'Mandibize le ndoda.'
Ngelo xesha, uTennon wayesele ephumelele. Amanqaku akhe okubamba afaka Ndididekile kwaye Ndididekile , Izibane zangoLwesihlanu ebusuku, njengo UBatman v Superman: Usuku loBulungisa e. Ukwangumvelisi. 'Ndandisoyika kuba wandixelela ukuba ngubani kanye kanye. Wayenyanisekile malunga nexesha lakhe elidlulileyo, 'wongeze kwi-OWN. 'Emva koko wandizisa ekhaya… Uthe nje,' Ungumfazi omhle kakhulu kwaye olungileyo. Bekumnandi nokuchitha ixesha kunye nawe. ' Uye wandixhawula. '
UJulius Tennon emva koko walandela kunye nenkosikazi yakhe yexesha elizayo ngalo myalezo mnye. 'Emva komhla wam wokuqala noJulius, ubomi bam baba bungcono,' utshilo uDavis. Ixhala lahamba, uloyiko lwaphela. Uvele wabuphucula ubomi bam. '
UViola Davis kunye neenkcukacha zomtshato zikaJulius Tennon
Jonga le post kwi-Instagram Iposi elabiwe nguVIOLA DAVIS (@violadavis)
Kudala ngaphambi kokunyuka kwe-microwding kunye nomtshato olandelayo, esi sibini sagqiba kwelokuba sihambe ngendlela esondeleyo yomtshato wabo ka-2003 ngokusingatha umsitho wabo weendwendwe kwigumbi labo. Emva koko, babamba omnye umtshato eRhode Island.
'Ndiyathanda imitshato,' ngaphambili uDavis uxelele uJimmy Kimmel. Ukuqala kwethu ukutshata, bekukho abantu abangama-50 kwi-condo yethu, ibinganele ngokwaneleyo. Kwiinyanga ezintathu kamva, satshata nabantu abali-100. '
UViola Davis kunye noMtshato kaJulius Tennon
Ifoto nguMat Winkelmeyer / Getty Izithombe
Ngo-2011, esi sibini yamkela intombi yabo, uGenesis Tennon. Umtshato wokwenyani we-aficionado (njengathi), uDavis noTennon bonwabele umsitho wesithathu wokubhiyozela umtshato wabo ukuvuselela izibhambathiso zabo ngoFebruwari 2013. Malunga neendwendwe ezili-137 zabona umsitho wokuvuselelwa kwesifungo, kubandakanya u-Oprah ngokwakhe. Ngalo msitho, uDavis wakhetha ilokhwe yomtshato e-halter ene-sequin bodice, eyayinxibe ngokugqibeleleyo ngokuchasene nesuti emhlophe yomyeni wakhe. IGenesis yafanisa abazali bayo nefrigi emhlophe ebengezelayo.
Ndifuna ukuba nomsitho owawumhle ngokwenene ngengubo entle kunye nokutya okumnandi, utshilo uDavis. Sinezona kutya zinkulu, iziselo zethu zokutyikitya. Yayibizwa ngokuba ijusi yeJu-V. ' (I-tequila esekwe kwi-cocktail yesiko imele uJulius noViola, okholisa ukubizwa ngabahlobo kunye nosapho njengo-'V. ')
Esi sibini sikonwabela ngakumbi ukonwaba ekhaya, ngenxa yoko babeziindwendwe abahlobo kunye nosapho. 'Bayandibona kudliwanondlebe kwaye ndizimisele kakhulu, kwaye ke ndisekhaya…' uDavis waqhula watsho noKelly noRyan. 'Kuza kubakho abantu abangama-45 [ngaphaya], umyeni wam uzakuba semva kwi-grill. Umlilo ozayo kwaye ndigqithile esitovini. ' (Kwaye, nazi iingcebiso ukuba ufuna ukukhuthazwa kwerejista yokubamba ekhaya.)
Indawo yomtshato ePuerto rico
kude kube nini uceba umtshato
Izipho zesikhumbuzo ngombono womyeni
indlela tie iqhina kulula amanyathelo